Namuhla, imikhiqizo umkhakha zezingane imelelwa olubanzi kakhulu, ezihlukahlukene ezifana, futhi kwenza ukuphila kube lula ukuze omama kanye obaba. Ngaphezu amathoyizi eziphambili, izingubo zanamuhla futhi ukhululekile kanye namanabukeni, izinguquko eziphawulekayo kwenziwa futhi ukudla zezingane. Ngakho, ngisho ezilahliwe kulencane bangathembela hhayi kuphela ubisi lwebele, kodwa futhi itiye izingane ekhethekile sika. Nice futhi eziwusizo, futhi kunenkolelo eyaziwayo isetshenziswe kuphela dopaivaniya izinsana, kodwa futhi ngezinjongo zempilo.
Kungani ngidinga itiye izingane
Ngayiphi oda kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe itiye zezingane? Abaningana impela ochwepheshe bezokwelapha uyavuma ukuthi ngisho umntwana osanda kuzalwa udinga hhayi kuphela ubisi lukamama ekudleni, kodwa futhi amanzi in uketshezi. Kuletha kusilela yayo kuyiqiniso ngokukhethekile ehlobo lapho izinga lokushisa komoya kuphezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izingane abaku- yokudla bokuzenzela noma exubile, kudingeka uketshezi kakhulu kunamanye. Yiqiniso, umuntu angalimisa ngesihloko elokuthi futhi bathi izingane dopaivat kuba lula futhi elungile ngaphezulu emanzini ethafeni, kodwa akunjalo. zezinkambi Wezingane herbal baqiniseka njengokuzijabulisa okungenangozi futhi abe ukunambitheka emnandi futhi ngokuvamile uthanda izingane okuningi kuka amanzi avamile. Ngaphezu kwalokho, ziwusizo kakhulu, ingasetshenziswa aphathe imikhuhlane ukuqinisa amasosha omzimba.
Daisy Classical for abancane
Enye yemikhiqizo ethandwa kakhulu kulesi sigaba kuyinto itiye yezingane "Ugogo Lukoshko". ingxube Patriotic unezisebenzi omkhulu futhi ngemali ephansi, nokuthi ihlinzeka okubuyayo, kanye ukuthandwa okusezingeni eliphezulu phakathi kwabantu. Isidingo enkulu kusekelwe itiye chamomile. isicelo salo kumelwe imikhuhlane, njengendlela yokuthola ekuthuthukiseni namasosha omzimba futhi ukunciphisa ukuvuvukala emphinjeni. Isiphuzo ovunyelwe ukusebenzisa kusuka 1 inyanga wokuphila, ukubunjwa yayo kuphela chamomile izimbali, kuyilapho nhlobo udayi, nezivimbelakuvunda eziyingozi kanye noshukela. izimbali omisiwe ochotshoziwe esimweni zithutha futhi zahlanganiswa ngo sachets ngabanye, okwenza kube lula kakhulu yenza, ungawenzi amaphutha kanye umthamo.
Mint Elimnandi ngoba isimiso sezinzwa
Enye isiphuzo omuhle - itiye zezingane "Ugogo Lukoshko" nge Mint. It is uvunyelwe ukuthatha izingane ezincane ezinezinyanga ezingu 3. Omunye Iphakheji liqukethe izikhwama 20, ngamunye equkethe 1 igremu zezitshalo ezahlukahlukene. Peppermint ayisithako ematheni isiphuzo, futhi akanayo izithasiselo ezilimazayo. Isiphuzo has anhlobonhlobo izinkomba, futhi inikezwa ukunqanda isimiso sezinzwa. Yidla kufanele kube iphethini ethize. Ngakho, kuze kube unyaka owodwa akufanele baphuze ngaphezulu kwenani evamile ngayo owondla usuku, ngemva konyaka ovunyelwe ukusebenzisa kufika ku izinkomishi ezimbili ngosuku. Ngokuvamile ukuphuza itiye esiqhubeka izinsuku ezingaba ngu-20, bese wenza ikhefu ngesikhathi esifanayo.
Iqoqo ewusizo izingane
itiye herbal izingane ezindala ingaqukatha izingxenye eziningana. Ngokwesibonelo, umkhiqizo owodwa kusukela brand "Ugogo Lukoshko" - ukuxuba izingane kusukela ezinyangeni 5, ehlanganisa fennel, lemon namafutha Thyme. Umthamo esiphezulu of the ukwakheka 200 namamililitha ngelanga, ukwakheka kufanele uzilungiselele ngaphambi nje kokuba ukusetshenziswa hhayi egcinwe okwesikhathi eside. Tea kusuka izithako enje:
ukuthola umphumela elwa namagciwane;
ekunciphiseni izinhlungu zibe;
ukupholisa isimiso sezinzwa;
ekunciphiseni izinqubo ukuvuvukala;
Tea nge rosehip ngoba amasosha omzimba
Nge 4 izinyanga ivunyelwe ukuthi isebenzise uhlelo itiye kusukela inkampani efanayo ngesisekelo rose okhalweni. Lesi simila ingxenye esiyingqayizivele iqukethe amanani abalulekile amavithamini C no E, okwenza nomthelela omuhle izivikeli mzimba. Phakathi kwezinye izinto, khona izinto ezifana potassium, magnesium, insimbi ne phosphorus, ehlanganisa okhalweni, inikeza ukuzinza wenani umzimba ithoni.
Kusuka ezinyangeni ezingu-6, inkampani inikeza abazali ukwethula ekudleni izinto ezifunwa ingane akukona kuphela herbal kodwa futhi berry zezinkambi. A ingxube amahlamvu currants kanye raspberries kanye apula ematisa imvuthu umzimba semali amavithamini kanye izingxenye amaminerali, ekhuthaza ukuthuthukiswa efanele, kugayeke nokuvikeleka.
itiye Noma yimuphi zezingane "Ugogo Lukoshko" unikezwe ulwazi oluningiliziwe kulokho izingxenye abayingxenye yayo, kulokho Isikali kumele kuthathwe futhi ingase ibekwe esingakanani. Lalelisisa ukuze endaweni yokugcina, imikhiqizo esiphelelwe yisikhathi is hhayi Kunconywa ukuba banikeze izingane ezincane.
Imibono abathengi ngemikhiqizo yasekhaya
Lesi sikhangiso okusemandleni mkhiqizo ngokubona abathengi lakhe langempela. What do omama abasha mayelana itiye zezingane? Uphenyo iningi labo abasakwazi omuhle, ukuze umkhiqizo iqondiswa ekudleni abantwana kanye ngenyanga eyodwa futhi ngonyaka. Abaningi bakhetha izinketho ethengekayo, kanti abanye ezibizayo, ukubukwa eziqondene kuchazwe esikuthandako ukunambitheka. Ngokuqondene brand yasekhaya ethandwa, ibuye ngempela kakhulu ezilinganiswe abathengi. Taste, isakhiwo esihle - lawa uphawu ikhwalithi zomama nezingane zabo.
nozakwabo bakwamanye amazwe
imikhiqizo Alternative ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Ugogo Lukoshko" futhi ezidume analogue bezinye izizwe, njenge itiye yezingane "Hipp". Nokho, Imikhiqizo ngaphansi kwalesi brand njengoba high abasebenzi kakhulu, ayabiza futhi emaphaketheni kancane elula. Izimfanelo ezinhle mikhiqizo akunakubangelwa, kanye nohlobo olubanzi kakhulu imikhiqizo, ngakho kukhona zezinkambi esekelwe fennel, caraway, lemon namafutha, chamomile, sitrobheli blackcurrant. Liphinde kabanzi emelelwa yonke imali amakhambi yakhelwe ukubhekana nezinkinga ezithile. Ngokwesibonelo, i-opholile kwemizwa ukuphathwa uhlelo noma esiswini. Tea Wezingane "Hipp" kubiza ruble mayelana 220-250 okwesikhathi umthamo 200 amagremu.
Yiqiniso, itiye opholile yezingane abakwazi kuphela ukuthenga, kodwa futhi ukuze uzilungiselele. Ukusela enjalo ngempela nomthelela omuhle isimo kwemizwa uhlelo imvuthu, kungasiza sinciphise ukukhathazeka, ngcono ukulala kanye nemizwelo. Ukunquma ukuthi bahlanganyele womshini opholile Ukwakheka yayo, kumelwe uqaphe kakhulu, ngokuvamile kakhulu abazali ukwenza mix phezu iso bese aphule olinganise kunesidingo. Ngakho, sokulungiselela izingane opholile itiye kungaba ngokuvumelana ekwakhiweni ezilandelayo:
2 wezipuni ochotshoziwe inflorescences of chamomile a ingilazi yamanzi abilayo, ukunikeza izingane isipuni esigcwele.
1 isipuni valerian, Mint 1 isipuni enkomishini yamanzi abilayo ngalinye; ukuphuza itiye ngokuhamba inyanga eyodwa.
5 amagremu camomile, lemon namafutha Mint ingilazi yamanzi. Ngemva ukuxuba ketshezi kufanele ubilise ihora. Umhluzi okuholela has a action soft kodwa ngempumelelo kakhulu.
Yini angeke kufakwe itiye izingane
Yimaphi amanye amakhambi kungaba ziyongeniswa itiye zezingane? Ngeshwa, uhlu yabo kakhulu, wehlile. Zama ukulandela izindlela zakudala (chamomile, peppermint, fennel) hhayi ahileleke usebenzisa ezihlukahlukene izipho zemvelo, uma kungenzeka Ukudidiyela izinqumo zabo wezingane, ngoba amanye amakhambi neze Kunconywa ukunikeza Kiddies. Ngokwesibonelo:
I ngokulandelana. Excellent for ukulibopha namabhati efudumele, kuba nomphumela omuhle isimiso sezinzwa, ingasetshenziswa ngaphakathi kuphela ngokuxhumana onguchwepheshe.
Calendula. kuhambisana kahle uhlambulule emphinjeni, ngoba impahla elwa namagciwane, futhi izingane, ikakhulukazi isencane is hhayi Kunconywa ukuyisebenzisa ngaphakathi.
Sage. Izingane ezincane engu-3 sikhonjiswa njengendlela yokwenza ephefumula ukwelapha umkhuhlane nezinye izifo.
Thyme. Isetshenziselwa ukulungiswa kokucindezelwa zangaphandle. It has ikhono ukuthuthukisa isikhumba Lentulo izakhiwo.
Ukhova. Futhi efanelekayo kuphela ukusetshenziswa yangaphandle ekwelapheni amanxeba kanye nezimboni.
I-green tea iyahluka kwenye black: nenzuzo izakhiwo, ikakhulukazi lokuqoqa zokuwugaya yokuphisa
Ungabamba kanjani i-butterfly "Avatar" futhi ube yinsimu ephumelelayo
Indlela ukhule ube anyanisi esikhulu kusukela Seva? Indlela ukutshala onion lishona ekhanyayo? Yini ugcwala onion amasethi ngaphambi abavakashayo?
Ukuphila noma umdlalo?